Cudurka Tiibishada oo ku soo badanaya Sweden | Somaliska
Bukaanada qaba cudurka Tiibshada (Tuberculosis-TB) ayaa ku soo badaya Sweden iyadoo sanadihii la soo dhaafay ay siyaaday tirada dadkaas 50%. Goobaha uu cudurka ku soo badanaya waxaa ugu horeeya magaalada Stockholm iyo qaasatan xaafadaha ay ku badanyihiin dadka soo galootiga ah. Sanadkii hore ayaa waxaa cudurka qaaday 684 qof.
“Qiyaastii waxaa cudurka TB uu daafaha caalamka ku dilaa 1.5 milyan oo qof sanadkii, iyadoo ay maalin kasta u geeriyoodaan dad ka badan 4000 qof. Iyadoo uu ku badanyahay cudurka wadamada faqiirka ah” ayuu yiri Knut Lönnroth oo ah dhaqtar ka tirsan Ururka Caafimaadka Aduunka (WHO).
Cudurka TB ayaa la sheegaa in uu xiriir weyn la leeyahay faqiirnimada, iyadooo goobaha ay ku noolyihiin dadka dhaqaalaha yar uu ku badanyahay cudurkaan. Sweden ayaa taasi ay marqaati u tahay in xaafadaha so galootiga oo guryaha ay ku wada noolyihiin dad badan uu ku badanyahay cudurka.
“TB waxay ku barbaartaa faqiirnimada. Dadka faqiirka ah ayaa markasta ku qaba dhibaatada ugu weyn, iyadoo xitaa cudurka TB uu dadka ka dhigo kuwo faqiir ah.” ayuu idaacada Sweden u sheegay Knut Lönnroth.
asc walaahi markan ka hadalno. Waxa kenayo waa gajada iyo shaqo la aant ka jirto iyo lacgta ceyrta oo aad u yar sida wadamd Yurub waxa u lacag yar Sverige
March 15, 2015 at 21:59
ASWW. bacda salaan cudurku waa waa cudur jira si aanada ugu kala gudba dadka meel kuwada nool Ilaahay ha inaga najeeyo dhamanteenba. waa run wuxu ku badan yahay wadamada iyo dadka faqriga wuxu ugu badanyahayna waa daryeen la aan iyo saxa xumada hadii uu hal qof qabo dadka la nool oo dhan ayuu gaarsiinayaa. Yasin kuguma raacsani labada qodob ee aad ka hadashay waa mida koowaade gaajada lagama qaado TB da mana keento lakiin way caawisaa oo hadii aad qabto cudurka daryeelna aad waydo waa xaalad daran, mida kale Sweden waxay ka midtahay wadamada yurub kuwa ugu lacagbadan xaga cayrta iyo xaga shaqadaba mushahar ahaan hadii qofku shaqeeyo, sidaa awgeed waxan ku leeyahay iimanso oo dayrada jooji lacagtana isku filaysii waa kaa badantahaye.